N@y Diary: ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရ၏ အမှန်တရားများ။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရ၏ အမှန်တရားများ။
််Forward Mail တစ်ခုကရထားတာလေးပါ...
-တည်မြဲမှု လုံးဝမရှိခြင်းသည်သာ သက်ရိှ၊သက်မဲ ့အားလုံးတို ့၏ ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲသော အမှန်တရား။
-မတည်မြဲတာကိုက သဘာဝတရား၊ အမြဲနားလည်လက်ခံနေနိုင်ဖို ့သာ ကြိုးစား။
-မတရားရှိနေလို. မအားတာပါ။မအားရင် ဆင်းရဲနေပါလိိမ်.မယ်။ အားရင်ချမ်းသာပါပြီ။ လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ တွေ ကြောင်. ငါထင်ပြီး မအားတာပါ။ တရားအားထုတ်မှ အားသွားပါလိိမ်.မယ်။ ငါမထင်ရင် ငါ.ကိစ္စကို မရှိတော.ဘူး။ ဒါဆိုအားပါပြီ။အားရင်ချမ်းသာပါပြီ။ -တနေ ့တနေ ့…. ကိုယ် ့တဏှာနဲ ့ကိုယ် အအားမရိှအောင် ချာချာလည်နေကြတာဘဝပါဘဲ။
-ဘာမှမဟုတ်တဲ ့အလုပ်ကို မလုပ်တတ်လို ့ဟိုလုပ်ဒီလုပ် လျှောက်လုပ်နေတာ။ ဘာမှမဟုတ်တဲ ့အလုပ်ကို ကြီးတတ်သွားခြင်းဟာ လိုလေးသေးမရိှ ပြီးပြည့်စုံသွားခြင်း ပါ ။
-များများသိစရာမလိုပါဘူး။များများသိ၊ များများမာန်တက်ပြီး တော ့မှ ၊များများဘဝင်မြင် ့နေတဲ့ လောကကြီးနဲ ့တော ့တခြားစီပါဘဲ ။
-အနိစ္စ၊ဒုက္ခ၊အနတ္တကို ငါ ့လင်၊ငါ ့သား၊ငါ ့မယား၊ငါ့သား၊ငါ ့သမီး၊ငါ ့အမေ၊ငါ ့အဖေ၊ ဆိုပီး သိမ်းပိုက်ထားတဲ ့အတွက်ပူရဘီပေါ ့။
-လှသလောက် အကျည်းတန်ရပီး လန်းသလောက်နွမ်းရတာချည်းဘဲ။
-သံသရာခရီးမှာ အခုလိုအကန်း၊အကန်းချင်း အားကိုးနေလို့ဘယ်မှမရောက်နိုင်ဘဲ ၊(၃၁)ဘုံထဲမှာ ချာချာလည်နေတာပါ။
-ဖြစ်လေရာဘဝ၊ရောက်လေရာနေရာမှာ ငါ၊ငါ ့ဥစ္စာဖြစ်ဖို ့ချည်းသာအဆုံးမရိှအောင် လုပ်နေကြတာ ဘဝပါဘဲ။
-ကိုယ်ဖန်ဆင်းထားတဲ ့ကိုယ် ့ဘဝအတွက်တော ့၊ကိုယ်ဟာ မရိှမဖြစ်၊အရေးပါအရာရောက်သူချည်းဖြစ်နေတယ်လို ့ထင်ရတာပါဘဲ။တကယ်တော့ကိုယ့်တဏှာနဲ ့ကိုယ်ရှုတ်နေတာ။
-အသိဉာဏ်ရှိတဲ ့လူ ့ဘဝမှာတောင်ကောင်းတာမလုပ်ရင်၊ ဒုက္ခရောက်နေသူကိုတောင် ကူညီရကောင်းမှန်းမသိတဲ ့တိရစ္ဆာန် ဘဝမျိုးရောက်သွားရင် ကောင်းမှုဘယ်လိုလုပ်တော ့မလဲ။
-ဘာမဆိုစိတ်ပါဘဲ ၊ဖြစ်ချင်ရင် ဘာမဆိုဖြစ်တာပဲ။ ဘာမှမဖြစ်ဖို ့သာ ခက်တာပါ။
-ခန္ဓာကို ငါထင်ရင် ၀ိုင်းနိှပ်စက်သမျှငါချည်းခံပေတော ့။
-ဘာမှမဟုတ်တာကို အဟုတ်ကြီးမှတ်ပြီး ကျေနပ်သာယာနေတာ ဘဝပါဘဲ။
-ကိုယ့်တဏှာနဲ ့ကိုယ်တော ့အ ရူးအမူးအငမ်းမရချည်းပါဘဲ။ ဘယ်ဘဝမှ အရူးမကင်းဘူး။
-သူ ့လောကနဲ ့သူတော ့ကိုယ်လိုတဏှာကောင် ၊ မာနကောင်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတာ ပါဘဲ။
-ငါဆိုတဲ့မာန်မာနရိှနေသရွေ ့ကတော ့ကိုယ်လို မာန်မာနနဲ ့သူချင်းအဆုံးမရိှအောင် ပြိုင်ဆိုင်ရုံဘဲ။
-ပြိုင်တယ်ဆိုထဲက အရှုံးချည်းဘဲ ။ နဲနဲရှု ံးတာနဲ ့များများရှုံးတာသာ ကွာတယ်။
-ဘာမှမဟုတ်တာကို အဟုတ်မှတ်ပီး အရေးတကြီးလုပ်နေတာ လောကပါဘဲ။
-မဟုတ်တာကို အဟုတ်လုပ်ထားတော့ဟုတ်တာဘာမှန်းကို မသိတော ့ဘူး။
-တငါငါနဲ ့နေချင်သလိုနေတဲ့မတရားကြောင် ့ဖြစ်တဲ ့ရောဂါကို တရားအားကိုးနဲ့ရှင်းမှသာ ဝေဒနာမရိှမှန်း ၊ဝေဒနာဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်မှန်းသိပြီး ဝေဒနာနိှပ်စက်တာ နောက်ခံရစရာမရိှအောင်ကို အမြစ်ပြတ်လွတ်မြောက်ပါတယ် ။
-တရားအားကိုးရင်၊အားကိုးသလောက် ကိုယ် ့ရဲ ့..အတိတ်၊ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ် လိုအင်ဆန္ဒတွေကို တရားကဖြည့်ဆည်းပေးပါလိမ် ့မယ်။
-တရားကိုသာ အချိန်ပြည့်အားကိုးလိုက်ရင်တော့ဘာမှလိုလေသေးမရိြှပီးပြည့်စုံအောင် တရားကဘဲ စီမံသွားပါလိမ် ့မယ်။ တရားအားကိုးတစ်ခုသာ ရိှရင် ကျန်တာ ဘာမှမလိုတော ့ပါဘူး။
-တရားအားထုတ်တာဟာ သဘာဝတရားနဲ. တွေ.ခွင်.ရဖို. ဘဲ။
ဖြစ်နေတာတွေက အမှန်တရား၊ မဆိုင်မှန်းသိတ့့ဲ အနတ္တ ဉာဏ်ရဖို. စာမေးပွဲဖြေတာ။
-နိရောဓသစ္စာဆိုတာ ၊ နိဗ္ဗန် ရဲ့အဓိပ္ပါယ်။ မရှိတဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှှုတွေ ချုပ်ငြိမ်းသွားတာ။ ရောဂါတွေ ပျောက်သွားတာ။ ဘာအပူမှ မရိှတော့တာ။
-တရားအသိဉာဏ် တခုသာ သိအောင် ကြိုးစားပါ။ အားကိုးပါ။ ဒီတရားက လမ်းခင်းပေးသွားလိိမ်.မယ်။
-ပညာတခု သိတာနဲ. ပြီးပြည်.စုံသွားတာပါဘဲ။
-ကိုယ် ့ဘဝလေးကို ငါယောကျင်္ား၊ ငါမိန်းမဆိုပီး ကျစ်ကျစ်ပါ အောင် ဆုတ်ကိုင်မထားနဲ ့။
တရားက စိတ်ကို ၊ ကာယကံ၊၀ဇီကံ၊မနောကံတွေကို ၊ စွန် ့လွှတ်ခြင်းပါ။ ကြောက်တတ်လို ့ဆုတ်ကိုင်ထားတာပါ ။ ကိုယ် ့ဘဝလေးကို အဆုံးရံှုး မခံရဲလို ငါ့ရိုးတွေ၊ ငါ့သွေးတွေ၊ ငါ့အသားတွေ၊ ငါ ့စိတ်ပဲဆိုပီး တော ့မှ ၊ငါ၊ငါ ့ဥစ္စာဆိုပီး သိမ်းပိုက်ထားတာပါ။အဲ ့ဒီကြောက်တဲ ့စိတ်ကို မကြောက်တဲ ့စိတ် ဖြစ်ဖို ့၊မစွန် ့လွှတ်ရဲတဲ ့စိတ်ကို စွန် ့လွှတ်ရဲဖို ့၊ မပြုလုပ်ပဲနေနိုင်ရဲဖို ့၊ ပြုလုပ်နေမှ ငါလုပ်နေတယ်ဆိုပီး ပြုလုပ်သမျှ တငါငါနဲ ့သိမ်းပိုက်ပီး တော ့မှ ..ကိုယ် ့ရဲ ့ဘဝလေးကို ကိုယ်ကာကွယ် စောင် ့ရှောက်နေတဲ ့အလုပ်ကို ..စွန် ့လွှတ်ရဲ မှ ဘဝမရိှတာကို သိမယ်....
-မြင်ပြီးပျက်သွားတာ.. မြင်ပြီးမရှိတော.တာ.. ကိုရိှတယ်ထင်ပြီး ငါမြင်တယ်
ဆိုပြီး တငါငါနဲ ့အဖြစ်တွေ စိတ်ဝင်စား နေတယ်။
….အမျိုးမျိုး မြင် နေရတာကို သဘောကျနေတယ်။ မြင် ပြီးရင်း မြင် ချင်နေတာ။
….အမျိုးမျိုး ကြား နေရတာကို သဘောကျနေတယ်။ ကြား ပြီးရင်း ကြား ချင်နေတာ။
….အမျိုးမျိုး နံနေရတာကို သဘောကျနေတယ်။ နံ ပြီးရင်း နံ ချင်နေတာ။
….အမျိုးမျိုး စား နေရတာကို သဘောကျနေတယ်။ စား ပြီးရင်း စား ချင်နေတာ။
….အမျိုးမျိုး ဝေဒနာတွေ ခံစား နေရတာကို သဘောကျနေတယ်။ ဝေဒနာတွေ ခံစား ပြီးရင်း ဝေဒနာတွေ ခံစား ချင်နေတာ။
….အမျိုးမျိုး သိ နေရတာကို သဘောကျနေတယ်။ သိ ပြီးရင်း သိ ချင်နေတာ။
….အမျိုးမျိုး တွေး နေရတာကို သဘောကျနေတယ်။ တွေး ပြီးရင်း တွေး ချင်နေတာ။
သံသရာ လည်တယ်ဆိုတာ..တဖြစ်ထဲ ဖြစ်နေတာကိုပဲ မသိတဲ ့အတွက် ဖြစ်ဆဲ ဖြစ်ဆဲ သဘောလေးတွေ အပေါ်မှာတငါငါနဲ ့သိမ်းပိုက်ပြီး လည်ရတာချည်းဘဲ။
-တရားကရိြှပီးသားမို့…စာအုပ်တေွထဲလျှောက်ရှာမနေဘဲ ခန္ဓာမှာ ဓါတ်ကြီး၄ပါး ဖောက်ပြန်တာွေ ဘဲသိအောင် ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်မှုုများလာတာနဲ ့အမျှ သဘာဝစာအုပ်ကြီးက ပြောတဲ့အမှန်တရားတွေကို ရင်အတွင်းနှလုံးသားအတွင်းက နက်နက်နဲနဲကြီးသိလာပါလိမ့်မယ် လို ့ဆရာတော် က အာမခံထားပါတယ်..
( ဘာဘဲညာဘဲမစဉ်းစားနဲ ့..ဘာဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူး။)
(ထုံးတမ်းစဉ်လာ တွေပြောင်းပြန်လှန်ပြီး ကြိုးစားကြည် ့ပါ တဲ ့။)
အဝိဇ္ဇာမှ ၀ိဇ္ဇာသို ့တရားအလှူတော်လုပ်ငန်း
ကို နေ ့စဉ်နံနက်တိုင်း ၈နာရီ၃၀မိနစ် မှ ၁၀နာရီ အထိ ဆရာတော်တရားပေးပါတယ်။ ဆရာတော် သင်ကြားညွှန်ပြတဲ့အတိုင်း လာရောက်တရားထိုင်နိုင်ပါတယ်။ တရားဆိုလို့ပါဋိတွေနဲ ့ဟောခြင်းမဟုတ်ပါ။ အမှန်တရားတွေကို ဆရာတော်ရဲ့အနတ္တပညာနဲ့သင်ကြားပေးခြင်းပါ။ နံနက်ပိုင်း ဒီအချိန်တွေ မအားရင် လဲ… မိမိ အားတဲ့အချိန်လာရောက်နိုင်ပါတယ်။ တနေကုန် တရားအခွေဖွင် ့ပေးထားပါတယ်။
ဒီwebsite လေးတွေထဲမှာ ဘာလုပ်လုပ်၊ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် .. အလွယ်တကူနဲ ့ကျင် ့လို ့ရတဲ ့နည်းတွေရှိပါတယ်။
pls read it and listen and practice
By NayNay at August 23, 2007
Nay Chi Zaw
SoftWare Programming in C++ for Structure of Femal...
Even Bill Gates Got Confused
အလြဲမ်ားနဲ႔ ျမန္မာျပည္ ၁
ဒီတစ္ေခါက္ စကၤာပူကျပန္လာေတာ႔ ေလဆိပ္က လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး မွာ ၾကံဳခဲ႔ရတာေလး Immigration counter မွာ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္လ သံုးလကမွ လုပ္...
Diary of My Broken Ankle
Day 39 (13-Jan-2018) Removed the plaster cast မေန႔ကေတာ့ အမွတ္တရေန႔ေလး တစ္ေန႔ေပါ့ေနာ္ ... ေျခေထာက္ ဒဏ္ရာရၿပီးကတည္းက ပတ္တီးႀကီးနဲ႔ မေ...
Setup Custom Domain Name on Blogger
I wanted to change my blog to my own domain since long time ago. But I was busy and I did not post anything new for many years anyway and ...
A visit to the clinic in my hometown
အသက္ကေလး ရလာလို႔လား မသိဖူး ခုေနာက္ပိုင္း သြားလိုက္ရတဲ႔ ေဆးခန္း၊ ရန္ကုန္ ျပန္ေရာက္ျပီးကတည္းက ေဆးခန္း ခနခန သြားရတယ္၊ ေျခေထာက္အတြက္ ျပရတာ ေဆးခ...